Ø Maamulka Hargaysa oo wali xabsiyada ku haya dadkii shacabka ahaa ee Ogaadeenya u dhashay.
Ø Ra´ iisal wasaare cusub oo loo magacaabay Soomaaliya.
Ø Ururka Suxufiyiinta aduunka oo Itoobiya Canbaareeyay.
Ø DKMG iyo Golaha samatabixinta soomaaliya oo eedeeny u soo jeediyay Itoobiya.
Ø Shir wayn oo ay qabteen ururuka dhalinyada ee Oromada.
Ø Baaqyo ka dhan ah falalka Maamulka Hargeysa oo ay Jaaliyadaha Ogaadeeniya soo saareen.
Ø Khudbad uu Madaxwaynaha DKMG ku canbaareeynayo Itoobiya.
Maamulka Hargaysa oo wali xabsiyada ku haya dadkii shacabka ahaa ee Ogaadeenya u dhashay.
Wararka naga soo gaadhaya Magaalada Hargeysa ayaa sheegaya in xabsiga loo taxaabay 7 gabdhoodh oo cunto u waday maxaabiistii dhawaan uu maamulka hargaysa xidh xidhay.
Todobadan Gabdhood oo lagu xidhey saldhiga Booliska dhexe ee Hargeysa ayaa ah gabdho aad u da,yar oo cunto u wada maxaabiista Somalida Ogadenia ee ku jira xabsiyada Hargeysa.
Waxana xabsiga dhexe loo raray 33 maxaabiista ka mid ah. Xog lagu kolsoonyahay oo nasoo gaadhay ayaa sheegeysa in maxaabiista xabsiga dhexe la geeyay laga fogeeyey booqashada ehelkooda iyo dadka u ololeeya xuquuqda Aadamaha oo isku dayay inay soo arkaan maxaabiista Soomaalida ogadeniya iyo tan Koonfurta Somaliya laga hayo.
Xogtu waxaa kale oo ay sheegtay in sababaha rarida maxaabiista ay kamid tahay in nabadsugidda Itoobiya ay fursad u hesho baadhista iyo la wareegida maxaabiista isla markaana ay ka qar soomaan indhaha dadweynaha.
Dhanka kale Bannaanbaxyo waaweyn oo lagu cambaaraynayo Maamulka Hargeysa ayaa ka dhacay Magaalooyinka Gobalada J/dhex iyo J/Hoose.
Bannaanbaxyadaa oo ahaa kuwo shacbi ah ayay ka sinaayeen Magaalooyinka Kismaanyo, Bu`aale, Afmadow, Badhaadhe, Dhoobley, Xagar iyo Qooqaani.
Dadweyne aad u cadheysan oo bannaan baxayay ayaa ku dhawaaqayay, "Maamulka Soomaali diidka Hargeysa yaa maasul ka ah waxii dhaca"
Bannaabaxyada oo ay soo qabanqaabiyeen qaybaha dhaqdhaqaqa ee bulshada ayaa waxa ka hadlay Maamulada Magaaloyinkaas iyo duqay caan ah oo laga tixgaliyo deegaanadaas.
Banaanbaxa Bu`aale aya waxa ka hadalay Guddoomiyaha Gobolka: Ducaale Gannaane iyo odayaal kale, halka kii Afmadow ay ka hadleen madax uu ku jiro duqa caan ka ah ee Cumar feen.
Sidoo kale guddoomiyaha degmada Badhaadhe ayaa hogaaminayay banaanbixii ka dhacay Dagmada Badhaadhe. Bannaanbaxayaashu waxa ay ka sinaayeen ayaa ahaa cambaaray iyo digniin loo dirayo Maamulka Hargeysa oo ay ku tilmaameen in uu masuul ka noqon doono waxa ka dhasha falalkiisan guracan.
Ra´ iisal wasaare cusub oo loo magacaabay Soomaaliya.
Madaxweyaha Dowladda KMG ah ee Soomaaliya Dr C/qaasim Salaad Xasan ayaa waxa uu Ra’iisal wasaare u magacaabay Maxamed Cabdi Yuusuf oo ahaa ku xigeenka labaad ee baarlamaanka ku meel gaarka ah.
Kulan ka dhacay xarunta madaxtooyada ee magaalada muqdisho ayna ka qayb galeen labada gole ee Dowladda ayaa Maxamed Cabdi Yuusuf waxaa loogu dhaariyay xilkaasi waxa uuna C/qaasim Salaad Xasan oo halkaasi ka hadlay sheegay in uu yahay nin adag oo ka soo bixi kara xilka loo magacaabay.
Ra;iisal wasaaraha cusub ee Dowladda KMG ah Maxamed Cabdi Yuusuf oo isaguna halkaasi ka hadlay waxa uu madaxweyaha iyo labada gole ee Dowladdaba ka codsaday in ay xilkaasi garab ku siiyaan maadaama uu yahay xil culus.
Ra;iisal wasaaraha cusub waxaa laga sugayaa in marka baarlamaanku ansixiyo Ra’iisalwasaaranimadiisa uu soo dhiso golaha wasiirada ee xukuumadiisa.
Maxamed Cabdi Yuusuf Waa Ra’iisalwasaarihii 3 aad ee soo mara Dowladda KMG ah tan iyo markii lagu soo dhisay Dalka Jabuutidii sanadkii 2000, waxaana xilkaasi horey looga qaaday Xasan Abshir Faarax iyo Cali Khaliif Galleydh.
Ururka Suxufiyiinta aduunka oo Itoobiya Canbaareeyay.
Wariyaha wakaalada wararka Ogadenya u jooga magaalada Addis-Ababa ayaa noo soo tabiyay in uu ururka suxufiyiinta aduunka ee loo yaqaano International Federation of Journalists (IFJ) uu canbaareeyay dawlada u wayaanuhu ka taliyo ee Itoobiya.
Ururka suxufiyiinta aduunku waxa uu faracyo ku leeyahay 115 wadan oo aduunka ka tirsan, fadhigiisuna waa magaalda Brussels ee wadanka Belgium.
Waxa u ururka suxufiyiinta aduunku dawlada Itoobiya ku canbaareeyay sida bini, aadanimada ka baxsan ee uu ula dhaqmo saxufiyiinta u dhalatay wadanka Itoobiya, ku waas oo loo gaysto Dil, Jidhdil, Xadhig iyo waliba dabagal lagu argagax galinayo wariyayaasha oo sharciga caalamiga ah ka soo horjeeda, waxaa kale oo uu ururku Xukuumada Itoobiya uu ku canbaareeyay mamnuucida uu manuucay ururkii Suxufuyiinta ee wadanka Itoobiya.
Xoghayaha guud ee ururka Suxifiyiinta Aduunka Mr. Aidan white ayaa Dawlada Itoobiya ka codsaday in ay joojiso siyaabaha xun xun ee ay kula dhaqanto suxufiyiinta u dhalatay wadanka Itoobiya ee ku nool wadanka gudihiisa, waxaa kale oo uu Mr. White ka codsaday in ay Xukuumada itoobiya si dagdag ah u fasaxdo Ururka Suxufiyiinta Itoobiya ee ay dhawaan mamnuucday.
Canbaareenta Suxufiyiinta waxaa ka horaysay canbaareen uu dhawaan Xukuumada Itoobiya u soo jeediyeen Ururka macalimiinta aduunka, kaas oo ku cambaareeyay Taliska Zenaawi xadgudubyada uu kula kacay macaliminta wadanka Itoobiya oo si sharciga ka baxsan shaqooyinka looga eryo.
DKMG iyo Golaha samatabixinta soomaaliya oo eedeeny u soo jeediyay Itoobiya.
`TNG-da uu hogaamiyo C/qaasim Salaad iyo Golaha samata bixinta ee Muuse Suudi
ayaa soo cusubooneysiiyay eedeeyn iyo cambaareyn ay u jeedinayaan dowlada
Itoobiya oo taageerta Golaha SRRC ee ay iska horjeedaan.
Xog-haya Gaashandhiga Golaha Samata bixinta hogaamiye kooxeed C/risaaq Isaaq Biixi ayaa sheegay in ay Itoobiya Ciidamo iyo saanad ay leeday soo galeen qeybo ka mida Gobolka Gedo gaar ahaan Degmada Ceel-waaq, dhinaca kale waxaa xoojiyay arrintaasi wasiiru dowlaha Madaxtooyada TNG-da Xuseen Salaax oo sheegay in Itoobiya ay ciidamo soo gelisay dhulka Soomaalida, isla markaana si cad u jebisay xayiraadii hubka ee Golaha Ammaanka isagoo si kulul u weeraray xukuumada Itoobiya ayuu dhinaca kale sheeghay inay dacwad arrintaasi ku saabsan gaarsiin doonaan dowlada Kenya iyo IGAD.
Shir wayn oo ay qabteen ururuka dhalinyada ee Oromada.
Radiyaha Oromada ee Sagalee Bilisumaa Oromo ayaa sheegay in ay ururka dhalin yarada ee Oromada oo loo yaqaano( Oromo Youth league) ay qabteen shir aad u balaadhan , shirkaas oo ay dhalin yaradu si aad u qoto dheer ugaga wada hadleen taariikhada gumaysiga Abasiiniya iyo halganka ay kula jiraan dadyowga lagumaysto.
waxayna shirkaas ka soo saareen baaq oo ay ugu baaqayaan walaalahooda la khalday ee dabo dhilifka u noqday shisheeyaha in ay khalad kooda fahmaan oo ay ka qayb qaatan halganka xaq ah ee lagula jiro gumaysiga Itoobiya.Waxa kale oo ay dhalinyaadaasi sheegeen in ay dadka Oromada ah oo kaliya ay ilaalin karaan sharafta iyo karaamada Oromada, taasina ay kaxigto in ay aayahooda iyagu ka taliyaan.
Dhalinyaradu waxay hadalkoodii ku soo gabagabeeyeen in ayna Xadhig iyo baqdin galin ku joojinaynin halganka ay kaga soo horjeedaan gumaysiga Itoobiya ee sii cadceedsaday.
C/nuur Sh Maxamed
Baaqyo ka dhan ah falalka Maamulka Hargeysa oo ay Jaaliyadaha Ogaadeeniya soo saareen.
Baaqyo is daba joog ah ayaa Radio Xoriyo ka soo gaadhaya Jaaliyadaha Ogaadeniya ee dibadaha. Baaqyadan oo dhamaantood cambaaraynaya falalka ka baxsan bani'aadamnimada iyo dhaqanka suuban ee Soomaalida ee uu Maamulka Magaalada Hargeysa kula kacay shacabka Ogaadeeniya ee aan waxba ka galabsan.
Jaaliyadahan oo dhamaantood xusay dhacdooyinkii hore ee uu Maamulka Magaalada Hargeysa kula kacay shacabka Ogaadeeniya ayaa waxay dhamaantood xuseen in ay aad uga xunyihiin talaabada aan gabashada lahayn ee uu caadeystay Maamulka Waqooyi Galbeed ee ah ka ganacsiga shacabka Ogaadeeniya.
Jaaliyadaha ay Baaqyadu naga soo gaadheen waxaa ka mid ah Jaaliyada Ogaadeeniya ee dalka Sweden, Jaaliyada Finland, tan Maagalada Melbourne ee dalka Australia iyo Jaaliyada beesha Absame ee Wadanka Denmark. Sidoo kale shir deg-degsiiyo ah oo ay yeesheen Odayaasha iyo Indheer garadka Jaaliyada Ogaadeeniya ee Magaalada Toronto ee dalka Kanada, ayaa wuxuu ahaa mid lagaga arinsanayo talaabada xad gudubka ah ee uu caadeystey Maamulka Magalaada Hargeysa ee ah ka ganacsiga shacabka Ogaadeeniya.
Dhamaan Jaaliyadaha baaqyadoodu na soo gaadheen waxay ugu baaqayaan Maamulka Waqooyi Galbeed in ay sida ugu dhaqsaha badan usii daayaan dhamaan dadka ay ku hayaan xabsiyada Hargaysa, isla markaasna katanaasulaan Ficilka cadownimada ah ee ay kula dhaqmayaan shacabka Somalida Ogadenya iyo dhibaatada ay dhex dhigayaan dadka wada dhashay. Waxaa kale oo ay intaas raaciyeen in ay ixtiraamaan, xidhiidhka bulsho, dhaqaale, iyo darisnimo ee ka dhaxeeya labada shacab ee dhiiga iyo dhaqanba wadaaga.
Ugu dambayntii, Jaaliyadaha Somalida Ogadenya waxay cadeeyeen in ay si buuxda u taageersanyihiin hadafka guud ee JWXO, isla markaana waxay ka digeen in hadii uu sii wado Maamulka Waqooyi Galbeed ficiladaas cadownimada ah in ay masuul ka yihiin cawaaqib xumada ka dhalata falkooda.
Dhinaca kale, wuxuu banaanbax ka dhacay Gobolo iyo deg-mooyin ka mid ah Jamhuriyada Soomaliya, sida Magaalada Bu'aale, Degmooyinka, Xagar, Afmadow, Qooqaani, Badhaadhe, iyo meelo kale, halkaas oo ay hadalo ka soo jeediyeen Odayaasha iyo mas'uuliyiinta aagaagas maamula.